आज साउन ३१ गते शनिवारः अजा एकादशीको व्रत, यस्ताे छ महिमा – Jagaran Nepal
आज साउन ३१ गते शनिवारः अजा एकादशीको व्रत, यस्ताे छ महिमा
सबै किसिमको समस्त पापराशिलाई नाश गर्ने सामर्थ्य वहन गर्दछ। जो मनुष्यले यस दिन भगवान ऋषिकेशको पूजा गर्दछ उसलाई वैकुंठको प्राप्ति अवश्यमेव हुन्छ।
कुंतीपुत्र युधिष्ठिरले भगवान् श्री कृष्णसित जिज्ञासा राखे- हे भगवन ! भाद्रपद कृष्णपक्षको एकादशीको नाम के हो? व्रत गर्ने विधि तथा यसको माहात्म्य कृपा गरेर बताउनुहोस। भगवान मधुसूदनले आज्ञा गर्नुभयो- यस एकादशीको नाम अजा हो। यसले सबै किसिमको समस्त पापराशिलाई नाश गर्ने सामर्थ्य वहन गर्दछ। जो मनुष्यले यस दिन भगवान ऋषिकेशको पूजा गर्दछ उसलाई वैकुंठको प्राप्ति अवश्यमेव हुन्छ। अब तपाई यसको कथा सुन्नुहोस।
प्राचीनकालमा हरिश्चन्द्र नामक एकजना चक्रवर्ती राजा राज्य गर्दथे। उनले कुनै कर्मका वशीभूत भएर आफ्नो संपूर्ण राज्य एवं धन त्याग्नु पर्यो, साथै आफ्नी पत्नी, आफ्नो पुत्र तथा स्वयं आफूलाई समेत बेच्नु पर्यो। ती राजा हरिश्चन्न्द्रले चांडालको दास भएर सत्यवादी भई मृतकहरूका वस्त्रादि ग्रहण गरी जीवन धान्नु पर्यो। तर जस्तै अप्ठ्यारो परिस्थिति आई लागे पनि उनी सत्यबाट विचलित भएनन। कति पटक राजा चिंताको समुद्रमा डुबेर मनमा तर्कना गर्दथे- म कहाँ जाऊँ, के गरौ, जसबाट मेरो उद्धार होस।
यसरी राजाका धेरै वर्ष बिते। एक दिन राजा यस्तै चिंतामा मग्न थिए कि गौतम ऋषि घुम्दाघुम्दै राजाका सामु आई पुगे। राजाले तिनलाई देखेर प्रणाम गरे र आफ्नो संपूर्ण दु:खपूर्ण कथाव्यथा सुनाए। राजाका दुखप्रद वेदना सुनेर गौतम ऋषिलाई दया पलायो अनि उनी राजालाई भन्न थाले- हे राजन ! तिम्रो भाग्यले आजबाट सात दिनपछि भाद्रपद कृष्णपक्षको अजा नामको एकादशी आउने छ, तिमी विधिपूर्वक त्यस दिन व्रत गर। गौतम ऋषिले राजालाई अझ बताए- यस व्रतको पुण्य प्रभावबाट तिम्रा समस्त पाप नष्ट हुनेछन। यसरी राजालाई आज्ञा गरी गौतम ऋषि त्यसै समय अंतर्ध्यान भए। राजाले ऋषिको भनाइबमोजिम एकादशी आएपछि विधिपूर्वक व्रत र जागरण गरे।
त्यस व्रतको प्रभावले राजाका समस्त पाप नष्ट भए। स्वर्गमा बाजा बज्न थाले र पुष्पको वर्षा हुन थाल्यो। उनले आफ्ना मृतक पुत्रलाई जीवित र आफ्नी स्त्रीलाई वस्त्र तथा आभूषणद्वारा सुसज्जित देखे। व्रतको प्रभावले राजालाई पुन: राज्य प्राप्ति भयो। अंत्यमा ती आफ्नो परिवार सहित स्वर्ग गए। हे राजन ! यो संपूर्ण चमत्कार अजा एकादशीको प्रभावबाट नै भएको हो। अत: जो मनुष्यले यत्नपूर्वक तथा विधिपूर्वक यस व्रतलाई पालना गर्दै रात्रिको समयमा जागरण गर्दछ, उसका समस्त पाप नष्ट भएर अन्त्यमा ऊ स्वर्गलोक पुग्दछ । यस एकादशीको कथाको श्रवणमात्रले पनि अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ।